“MIHAMY MADA FASHION” : Hotanterahina etsy Mahamasina ny andiany faharoa
Hikarakara ny “Mihamy Mada Fashion” andiany faharoa ao amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny Minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina amin’ny 12-13 ary 14 febroary 2021 ho avy izao. 7 janvier 2021
Hetsika hanasongadinana sy hanomezan-danja ny haihaingo eto Madagasikara izy ity ary iantsoana ireo rehetra misehatra amin’izany. Haseho mandritra ity hetsika “Mihamy Mada Fashion” ity koa ny famoronana lamaody izay mifototra amin’ny soatoavina malagasy manao hoe : “Ny soa fianatra”. Tanjon’ny Minisitera amin’ny fikarakarana ity hetsika ity ny hisarihana ny mpiara-belona rehetra hanjifa ny vita malagasy izay foronina sy vokarina eto Madagasikara.
Afaka mandray anjara amin’ity hetsika ity avokoa ireo rehetra monina eto Madagasikara, ka mamokatra asa vita malagasy sy mitondra hevi-baovao ho amin’ny fampandrosoana ireo famoronana eo amin’ny sehatry ny haihaingo na ireo mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny lamaody toy ny taovolo, taokiraro, taofiravaka, haihary, haihatsarana, haizaitra, haisaripika ara-damaody sy ireo maro hafa heverina ho talenta manome vahana ny vita malagasy.
Ho an’ireo liana sy misehatra amin’izany, olona iray ihany no soratana ao anatin’ny antontan-taratasin’ny mpandray anjara ary atao misongadina amin’ny famoronana atao ny fanandratana ny hakanton’ny vita malagasy. Efa nisokatra nanomboka tamin’ny alatsinainy 04 janoary 2021 lasa teo ny fametrahana ny antontan-taratasy ary tsy hifarana raha tsy amin’ny 22 janoary 2021. Azo sintonina ao amin’ny tranonkala na ao amin’ny pejy fesibokin’ny Minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina na koa alaina mivantana any amin’ny foibem-paritry ny Minisitera ny antontan-taratasy fenoina ho an’ireo mpandray anjara.
Marihina fa andiany faharoa ity hotanterahina etsy Mahamasina ity. Ny andiany voalohany kosa dia notontosaina ny sabotsy 15 Febroary 2020 tamin’ny taon-dasa, tao amin’ny Lapan’ny Kolontsaina Mahamasina.
Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (450) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (160) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (72) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (70) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (64) 2 mars 2021 Vehivavy iray maty tao Nosy Be, mitontaly 83 ireo marary CORONAVIRUS ATY DIANA (50) 2 mars 2021